Nepal Dayari | से’प्टिक ट्यां’कीको जगमा राखेर माथिबाट ढ’लान गरिएको अवस्थामा भेटियो सुजिताको श’व !
से’प्टिक ट्यां’कीको जगमा राखेर माथिबाट ढ’लान गरिएको अवस्थामा भेटियो सुजिताको श’व !
असार २८, २०७८ सोमबार ८१४ पटक हेरिएको
महोत्तरीमा एक महिलाको शव गा’डि’एको अवस्थामा फे’ला परेको छ। लोहारपट्टी नगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित भ्रमरपुराकी २७ वर्षीया सुजिता ठाकुरको श’व फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्यले जानकारी दिए।
जेठ २० गते देखि ह’रा’इरहेकी सुजिताको श’व आइतबार बिहान करिब १० बजे फे’ला परेको हो। प्रहरीले मध्यराति ती महिलालाई सो स्थानमा गा’डि’एको हुनसक्ने भन्ने सूचना पाएको थियो। हराएको केही दिनसम्म पनि सम्पर्कमा नआएपछि उनका आमा-बुवाले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। सूचनापछि रातिदेखि नै खोजी गरी श’व निकालिएको हो।
प्रहरीले ह ‘त्या आ’रो’पमा उनका श्रीमान, देवरसहित पाँच जनालाई नि’य’न्त्र’णमा लिएर अ’नु’स’न्धा’न गरिरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टले जनाकारी दिए। उनका अनुसार सुजिताको श’व मृ’त’कका ससुराको जग्गामा फे’ला परेको हो। सुजिता बस्ने घरबाट करिब आधा किलोमिटर टाढा रहेको जग्गामा श’व फेला परेको हो। त्यहाँ गा’डे’र ढलान गरिएको अवस्थामा फेला परेको उनले बताए।
‘यहाँ काठका मु’ढाहरू गो’दा’म जसरी राख्ने गरेको रहेछ। जग्गा लामो खालको छ। त्यहाँ करिब नौ फिट गहिरो से’प्टि’क ट्या’ङ्की बनेको छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूले ट्या’ङ्कीको भुइँमा थप चार फि’ट खा’ल्डो खनेका छन्। श’वचाहिँ बोराभित्र राखेर त्यहाँ गा’डि’ए’को अवस्थामा फेला परेको हो।’ श’व माथिबाट पनि ढलान नै गरेको उनले बताए। ‘चार फि’टमुनि श”व राखेपछि माथिबाट फेरि ढ’ला’न गरिएको छ। ढलानमाथि पनि तीन फिट जति पानी जमेको थियो,’ उनले भने।
घ’ट’नास्थ’ल थप लु’का’उन उनीहरूले बाहिरबाट पनि का’ठका मु’ढाहरू राखेका थिए। प्रहरीले आइतबार श’व निकालेपछि मृ’त’कका आमा-बुवाबाटै स’ना’ख’त गराइएको थियो। प्रहरीले श’वको पो’ष्ट’मा’र्ट’मको लागि प्रदेशिक अस्पताल जनकपुर पठाउने तयारी गरेको छ। प्रहरीका अनुसार सुजिताको श’व यसअघि पनि अ’न्य’त्रै गा’डि’ए’को थियो। तर त्यहाँ फेला पर्ने आ’शं’का पछि आ’रो’पि’त व्यक्तिहरूले से’फ्टि’क ट्या’ङ्की मुनि गा’का हुन्। ‘यो त दोस्रो स्थान हो।
पहिले यहाँभन्दा एक किलोमिटर टाढा रहेको आफ्नै खेतमा गा’डि’ए’को थियो,’ प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्टले भने,’त्यहाँ थाहा पाउँछन् भनेर फेरि उनीहरूले यहाँ ल्याएर गा’डे’का हुन्। हामीले सूचनाको आधारमा श’व भेट्टायौं। त्यसपछि ढलान फो”डे’र हेर्दा श”व भेटियो।’ पहिला श”व गाडिएको स्थानमा प्रहरीले क पा ल, त न्ना/प र्दाका केही टु क्रा र नुन फेला पारेको थियो। सुजिताको ह ‘त्या घ’रा’य’सी वि’वा’द’कै कारण हुनसक्ने प्रा’र’म्भि’क अ’नु’स’न्धा’नबा’ट खुलेको छ। सेतोपाटी बाट